सरकार परिवर्तनले केसीका माग ओझेल पर्ने खतराः भट्टराई | Hamro Doctor info@hamrodoctor.com
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि त्रि वि शिक्षण अस्पतालमा आमरण अनसन बसेका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीका मागको समर्थन गर्दै ऐक्यवद्धता जनाउने क्रम जारी छ । विभिन्न चिकित्सक, विद्यार्थी, मानवअधिकारर्की र नेतालगायत सर्वसाधारणले केसीका माग जायज भएको भन्दै अनसनको समर्थन गरेका छन् । केसीले अनसन शुरु गरेका पाँच दिनपछि नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले अनसन स्थलमै पुगेर केसीको अनसनको समर्थन गरेका छन् । फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया
The Institute of Medicine (IOM) was established in 1972 under Tribhuvan University with the mandate and the responsibility of training all the categories of health manpower needed in the country....
मलद्धार वरपर घाउ आए वेवास्ता नगरौं, यो फिस्टुला पनि हुन सक्छ ? बच्न के गर्ने ? योनी किन चिलाउँछ ? वृद्धावस्थामा हुने बिर्सने रोग डिमेन्सिया भनेको के हो ? डा प्रदीप पाण्डे उच्च रक्तचापले मुटुमा कस्तो असर गर्छ ? बाथका लागि आयुर्वेदिक उपचार उत्तम Tweets by @hamrodoctor